Libya: Mamaky Ady Amin’ireo Toerana Masin’ny Soufis ny Salafista · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2012 11:05 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, বাংলা, Español, Français, English
Iharam-panafihana – ataon'ireo Salafista – ireo toeram-pivavahana sy vakoka Soufis. Notafihan'ireo Islamista fatra-pifikitra amin'ny nentin-drazana ireo toerana masina sy fitehirizam-bokin'ny Soufis tany avaratra-andrefan'i Zliten, ao an-tanànan'i Misrata, sy tao Tripoli renivohitra. Ireo fanafihana, nohelohin'ny UNESCO, dia niteraka hatezerana teo amin'ireo Libiana.
Mivaky toy izao ny famantarana ny sary eto ambany [ar] :
Saripika iray faharoa [ito ambany ito], avy amin'io hetsi-panoherana io ihany, no mampiseho vehivavy iray mitazona sorabaventy mivaky hoe :
Ao amin'ny YouTube, Kalam Research dia mizara andianà lahatsary mitantara ny fahavoazana. Anisan'ireny ity lahatsary ity [nobahanan'ny tompony ny fahafahana mametraka ny lahatsary], mampiseho ny fanimbàna ny Maoske Sidi Abdussalam tao Zlient, sary nalaina tamin'ny 24 Aogositra 2012.
Ilay lahatsary dia maneho ireo fandravàna faobe manjo ireo maoske, tafiditra anatin'izany ny rindrina, hatramin'ny fanimbàna ny andrin-trano sy ny tilikambo avy any anatiny. Ilay maoske dia toeram-ponenan'ny manampahaizana Soufi tamin'ny taonjato faha-15 sisa tavela ary nanana tranomboky nanan-tantara nifamatotra tamin'ireo boky tsy voasanda vola nisy tao aminy, izay potik'ireo mpanafika azy rehefa nodoran-dry zareo ilay tranomboky.
Lahatsary iray hafa no mampiseho ny fanimbazimbàna ny Fasan'i Sidi Al Makari, ao amin'ny Làlana Sha't ao Tripoli. Ity lahatsary ity dia nalaina ihany koa tamin'ny 24 Aogositra.
Lahatsary iray hafa no manome antsipirihany amin'ny fanimbàna ny Zawiyat Blat, mbola ao Zliten ihany koa.
Ary lahatsary iray hafa no manasongadina ny fanimbazimbàna ireo Fasana Ottoman Qaramanli : Fianakavian'i Yusuf Pasha Qarmali ao amin'ny Làlana Sha't ao Tripoli